SONATA-CANTATA: January 2011
Strawberry... Cherry... ရောရင်...
စာမရေးဖြစ်တာ ကြာလို့ ပုံလေးတင်ပြီး နှုတ်ဆက်ရုံပါပဲ...။
ဘလော့ဂ် က ခေတ်သစ် လူမှုဆက်ဆံရေးပုံစံ ဆိုရင်၊ မသီတာကြီး ငြိမ်လွန်းနေတော့ အတင်း မပြောတတ်တော့ဘူး ထင်သွားမှာ စိုးလို့ လူးလဲထလာတာ...။
ပြောရရင်တော့ မင်္ဂလာဆောင်အကြောင်း... အကယ်ဒမီအကြောင်းတွေ ပုံလို့ ပုံလို့...။ မသီတာတို့ ငယ်ငယ်ကပေါ့ ရုပ်မြင်သံကြားတွေ ပေါ်လာတော့ မိသားစုဝင်တွေ စုံစုံလင်လင်နဲ့ TV ရှေ့ထိုင် ဇတ်လမ်း ကြည့်ကြတာ၊ အယင်က ရုံထဲ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ကြည့်ရသလိုမဟုတ်ပဲ တမျိုးတဘာသာပေါ့လေ... ကြည်နူးစရာတော့ ကောင်းပါတယ်။ ခက်တာက မသီတာတို့ အကိုကြီး လင်မယား...။ သူတို့က ဇတ်ကားကြည့်ရင် အေးအေးမကြည့်ကြဘူး။ နှစ်ယောက်သား ဝေဖန်ရေးနဲ့ လေကန်ရေးကို အပေးအယူ အချီအချနဲ့ လုပ်ကြတာများ...။ သူတို့က လူကြီးတွေ ဆိုတော့ နိုင်ငံခြားရော... ပြည်တွင်းကပါ ဇတ်လမ်း ဇတ်ကားပေါင်း များစွာကို ကြည့်ရှုခံစားထားဖူးပြီးသား ဆိုတော့... မျှော်လင့်ချက်တွေက မြင့်မားနေတော့တာ။ ကိုယ်က ခံစားမလို့ ရှိသေး ... ကိုကြီးက "ဟင် မင်းသားကလည်း ဘယ်လိုကြီးလည်း အောက်လိုက်တာ..." ဆိုရင် ... ယောင်းမကြီးကလည်း ... "အင်းလေ ဒါများ မင်းသားတဲ့" ဆို လုပ်ရော...သွားရော သွားရော...။ အဲ့ဒါကြောင့် မသီတာတို့ အငယ်တွေက ကိုကြီးတို့နဲ့ ဇတ်လမ်းမကြည့်ချင်ဘူးဟာ လို့ ကွယ်ရာမှာ ကျိတ်ရင်ဖွင့်ကြတာပေါ့။
အခုလည်း မသီတာတို့ အသက်ကြီးလာပါပြီ... ပါးစပ်ကထွက်သမျှက ဝေဖန်ရေးကြီးပဲ များနေလို့ အသာလေး တတ်နိုင်သလောက် ဘရိတ်အုပ်ပါတယ်။ အင်း ဒီကြားထဲကပဲ...
အကယ်ဒမီပွဲက မင်းသား၊မင်းသမီးပုံတွေ အများကြီး အင်တာနက်ကနေ ကြည့်ရပါတယ်။ လှလှပပ ၀တ်စားထားကြတာ မျက်စိ ပသာဒ ဖြစ်စရာပါ။ ဟိုအယင်နှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ်လောက် ကတည်းကပဲ သတိထားမိတာက မင်းသားတွေရဲ့ ၀တ်စုံ။ မြန်မာ အမျိုးသား ၀တ်စုံဆိုတာကလည်း တိုက်ပုံနဲ့ လုံချည်... ဒါပါပဲ။ ဒါကိုပဲ လှလှပပ ဖြစ်အောင် အမြင်ဆန်းအောင် ကြိုးစား တီထွင် ၀တ်ဆင်ကြပါတယ်။ သူတို့ လောက သဘောအရ လူအများ နှစ်သက်သဘောကျ အာရုံစိုက်ခံရအောင် အပြိုင်အဆိုင် ကြိုးစားကြရတယ်လို့လည်း နားလည်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရွှေပွဲလာ မင်းသားများရဲ့ ပွဲတက် ၀တ်စုံများဟာ ပရိသတ်ကို တရားသော ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ လွတ်လပ်စွာ ဖြာထွက်နေတဲ့ ရသ ကို မပေးစွမ်းနိုင်ပဲ၊ တနှစ်လာလည်း စပွန်ဆာ ချပေးတဲ့ theme အောက်မှာ... ဘာကြောင့် လက်ဝါးကြီးအအုပ်ခံ ပြားပြားဝပ်နေကြပါသလဲ... ဆိုတဲ့ အသံကြီး မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ထွက်လာပါတော့တယ်။
တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူတွေ ယူနီဖောင်းဝတ်ရကတည်းက နာကြည်းနေရတဲ့ အထဲ
Posted by Sonata Cantata 19 comments
Labels: သီတာ, ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်း
Abhidhamma Books In English
စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသည့် အဘိဓမ္မာ စာအုပ်အချို့ကို ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
1. Compendium of Philosophy - U Shwe Zan Aung
သင်္ဂြိုဟ်ကျမ်းဟု အသိများသော အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟကျမ်း၏ ပထမဆုံး အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ကို ဆရာဦးရွှေဇံအောင် (၁၈၇၁-၁၉၃၂) က လန်ဒန် ပါဠိအသင်းတော်ကြီး (PTS) အတွက် “Compendium of Philosophy” ဟူသော အမည်ဖြင့် ရေးသား ပြုစုခဲ့သည်။ သင်္ဂြိုဟ် မိတ်ဆက် Essay ကို စာမျက်နှာ ၇၅-မျက်နှာမျှ အကျယ်တ၀င့် ရေးသား၍ ကျမ်းဦးနိဒါန်းအဖြစ် ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့အပြင် ဘာသာပြန်ရာ၌ ခက်ခဲသော အဘိဓမ္မာ ဝေါဟာရများ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ရှင်းလင်းရန် အောက်ချေ မှတ်စုများ ရေးထိုးထားသည်။
Ebook-Link: Compendium of Philosophy
2. Abhidhammattha Sangaha: A Manual of Abhidhamma - Nārada Mahāthera
သီရိလင်္ကာ ရဟန်းတော် အရှင်နာရဒ မဟာထေရ် (၁၈၉၈-၁၉၈၃) ကလည်း Abhidhammattha Sangaha - A Manual of Abhidhamma ဟူသော အမည်ဖြင့် အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟကျမ်းကို အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်ဆို၍၊ စာကိုယ် တစ်ပိုဒ်ချင်းစီ၏ အဓိပ္ပါယ် အဖွင့်များကို ရေးသားခဲ့သည်။ ကျမ်းပြုရာတွင် ဆရာဦးရွှေဇံအောင်၏ သင်္ဂြိုဟ်ဘာသာပြန်နှင့် Mrs. Rhys Davids ၏ Buddhist Psychology (ဓမ္မသင်္ဂဏီဘာသာပြန်) စာအုပ်တို့၏ အကူအညီကို ရယူခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထား၏။
Ebook-Link: A Manual of Abhidhamma
3. A Comprehensive Manual of Abhidhamma - Bhikkhu Bodhi
အရှင်နာရဒ မဟာထေရ် ရေးသားပြုစုသော ”Manual of Abhidhamma” ကို အခြေခံကာ၊ အမေရိကန် ရဟန်းတော် ဘိက္ခုဗောဓိ (၁၉၄၄ - ) က အသစ်ပြန်လည် ရေးသား တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။ အဘိဓမ္မာ ဝေါဟာရများကို ဘာသာပြန်ရာ၌ အင်္ဂလိပ် ရဟန်းတော် ဘိက္ခုဉာဏမောဠိ ၏ Path of Purifications (၀ိသုဒ္ဓိမဂ် အဋ္ဌကထာ ဘာသာပြန်)နှင့် အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုက်ညီစေရန် ပြင်ဆင် တည်းဖြတ်ထား၏။ ထို့အပြင် အဓိပ္ပါယ် ရှင်းလင်းချက်များတွင် ဋီကာကျော် ခေါ် အဘိဓမ္မတ္ထ၀ိဘာဝိနီ ဋီကာကျမ်းနှင့် လယ်တီဆရာတော်၏ ပရမတ္တဒီပနီ ဋီကာကျမ်း နှစ်စောင်၏ အဆုံးအဖြတ်များကိုပါ ထည့်သွင်း၍ ရေးသားထားပါသည်။
Ebook-Link: A Comprehensive Manual of Abhidhamma
4. Guide Through the Abhidhamma Piṭaka - Nyanatiloka Mahāthera
ဂျာမန် ရဟန်းတော် အရှင်ဉာဏတိလောက မဟာထေရ် (၁၈၇၈ - ၁၉၅၇) က အဘိဓမ္မာ ၇-ကျမ်း၏ အနှစ်ချုပ်မှတ်စုများအား အဘိဓမ္မာပိဋက လမ်းညွှန် အဖြစ် ရေးသား ထားသည်။ အဘိဓမ္မာ တစ်ကျမ်းလျှင် အခန်းတစ်ခန်းစီ ရေးသားထား၍၊ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဒေသနာကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။
5. Abhidhamma Studies: Buddhist Explorations of Consciousness and Time – Ven. Nyanaponika Thera
အရှင်ဉာဏတိလောကထံတွင် ပညာသင်ယူခဲ့သည့် ဂျာမန် ရဟန်းတော် အရှင်ဉာဏပေါဏိက မဟာထေရ် (၁၉၀၁-၁၉၉၄)သည် အဘိဓမ္မာကျမ်း၏ ပထမဆုံးကျမ်း ဖြစ်သော ဓမ္မသင်္ဂဏီကျမ်းနှင့် ယင်း၏ အဋ္ဌကထာဖြစ်သော အဋ္ဌသာလိနီတို့ကို ဂျာမန် ဘာသာ ပြန်ခဲ့သည်။ အကြောင်းမညီညွတ်သဖြင့် ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့သော်လည်း ယင်းကျမ်း နှစ်စောင်အား ဘာသာပြန်စဉ် လေ့လာခဲ့သည်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်သည့် စာတမ်း ၄-စောင်ကို ရေးသားခဲ့သည်။ ယင်းစာတမ်းများအား စုပေါင်း၍ အဘိဓမ္မာ လေ့လာသုံးသပ်ချက် Abhidhamma Studies: Buddhist Explorations of Consciousness and Time ဟူသော အမည်ဖြင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့သည်။
ဓမ္မသင်္ဂဏီကျမ်းမှ စိတ်ဖြစ်ပေါ်ပုံ အခန်း (စိတ္တုပ္ပါဒကဏ္ဍ)မှ စိတ်, စေတသိက်တို့အား အုပ်စုများခွဲ၍ ပိုင်းခြားဝေဖန်ခြင်းနှင့် အချိန်ကာလကို အဘိဓမ္မာသဘောအရ သုံးသပ် ဝေဖန်ချက်များပါဝင်သည်။ အဘိဓမ္မာ ရှေ့ပိုင်းကျမ်းများတွင် တရားသဘောတို့ကို အုပ်စုများဖွဲ့ကာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ လေ့လာသည့် Analytical approach ကို ပဓာနသုံး၍၊ ပဋ္ဌာန်းကျမ်းတွင် ထိုတရားသဘောတို့သည် သီးခြားမတည်ဘဲ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု အကြောင်းအကျိုးအားဖြင့် ဆက်စပ်ဖြစ်ပေါ်နေကို လေ့လာသည့် Synthetical approach အား အသုံးပြုသည်ကို တွေ့ရ၏။ ထို နည်းနှစ်မျိုးတို့အား နှိုင်းယှဉ်လေ့လာသည့် စာတမ်းတစ်ခုကိုလည်း အခန်းတစ်ခန်း အဖြစ် ထည့်သွင်း ရေးသားထား၏။
Ebook-Link: Abhidhamma Studies
6. Abhidhamma In Daily Life - Nina Van Gorkom
ဒတ်ခ်ျအမျိုးသမီး Nina Van Gorkom ရေးသားသော Abhidhamma In Daily Life မှာ အဘိဓမ္မာကို သင်ရိုး ကျမ်းကြီးများအတိုင်း မလေ့လာဘဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖတ်ရှုလေ့လာလိုသူများ အတွက်သင့်တော်သော စာအုပ်ဖြစ်သည်။ “နေ့စဉ်ဘ၀ထဲက အဘိဓမ္မာ” ဟု အမည်ပေးထားသည့် အလျှေက် နေ့စဉ်ဘ၀ တွေ့မြင်နေရသော အဘိဓမ္မာ သဘောတရားများအား သုတ္တန်ဒေသနာများ, ၀ိသုဒ္ဓိမဂ်ကျမ်းမှ ကောက်နှုတ်ချက်များနှင့် ယှဉ်တွဲကာ ရေးသားထားသည်။ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ ရေးသားသည့် “ကိုယ်ကျင့်အဘိဓမ္မာ” စာအုပ်သဘောမျိုး ဖြစ်သည်။
Ebook-Link: Abhidhamma In Daily Life
7. Abhidhamma In Daily Life - U Ko Lay
မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ ရေးသားသည့် “ကိုယ်ကျင့်အဘိဓမ္မာ” စာအုပ်အား အငြိမ်းစားပါမောက္ခ ဦးကိုလေး (ဇေယျာမောင်) က အကျဉ်းခြုံး၍ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ပြန်ထားသော စာအုပ်ဖြစ်သည်။
8. Buddha Abhidhamma: Ultimate Science - Dr. Mehm Tin Mon
Ebook Link: Buddha Abhidhamma: Ultimate Science
Labels: ဓမ္မဒါန, ဓမ္မမှတ်စု, အဘိဓမ္မာ, ဧရာ, ဝေမျှခြင်း
ဖိုနဲ့မ သဘာဝ လူသားနှစ်ဦး ပေါင်းသင်းနေထိုင်ကြရာက စ
မိသားစုတွေ ပေါက်ဖွားလာကြရာမှာ … အဟမ်း အဟမ်း
၀ါကျွတ်ကာလက စလို့ အလျှိုအလျှို ပေါ်လာကြတဲ့ ဟိုကဒီက မင်္ဂလာဆောင်များအတွက် မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ ပို့စ်လေးပါ။ အထူးအားဖြင့် မသီတာရဲ့ တူတယောက်၊ တူမတဦး၊ သူငယ်ချင်း Kမမ၊ TZA တို့အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
❤♫ အချိန်တန် အရွယ်ရောက်ကာ ♪ လူလားမြောက်ရင် ချစ်သူနဲ့ တွဲနှင်♪ ဘုရားသွားကျောင်းတက် နေ့စဉ် မောင်နဲ့ခင်♪
❤♫ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် …
❤♫ မေတ္တာတွေ သက်ဝင် ♪ ကရုဏာတွေ သက်ဝင် ...
တေးရေး- သဟာယ ဆရာတင်
မူလ အဆိုရှင် - မေရှင်
ဖြစ်လေရာ ဘ၀မှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ ပေါင်းဆုံခွင့်ရချင်ရင်…
Posted by Sonata Cantata 17 comments
ကမ္မဿကတ (၄) - ကံနှင့် အကျိုးပေး
“တူသော အကျိုးပေးသည်” (ဇနေတိ သဒိသံ ပါကံ) ဟူသော စကားရှိသည်။ ကောင်းသောကံကို ပြုက ကောင်းသော အကျိုးပေး၍၊ မကောင်းသောကံကို ပြုက မကောင်းသော အကျိုးပေးသည်။ ဤသည်ကိုပင် အချို့က “သက်ရောက်မှုတိုင်းတွင် တူညီသော တန်ပြန်သက်ရောက်မှု ရှိသည်” ဟူသော ရူပဗေဒနိယာမနှင့် နှိုင်းယှဉ် ဥပမာပြုလေ့ရှိကြသည်။ သို့သော် ကံနှင့် အကျိုးတရားတို့သည် အဖြောင့်အားဖြင့် (linearly) ဆက်စပ်နေကြခြင်းမျိုးကား မဟုတ်ပေ။ လောကတွင် မကောင်းမှုတို့ဖြင့် အသက်မွေး၍ ကြီးပွားနေသူများ ရှိသည်။ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်ပါလျှက် ဆင်းရဲဒုက္ခ ရောက်နေကြရသူများလည်း ရှိသည်။ အကျိုးပေးသည့် အချိန်ကာလ ကွာခြားခြင်း, အကျိုးပေးသည့် ပမာဏ ကွာခြားခြင်းတို့ကြောင့် ကံတရား၏ အကျိုးပေးပုံသည် ဆန်းကြယ်ရှုပ်ထွေးလှသည်။ ထို့အပြင် ဘ၀တွင် ကြုံတွေ့ခံစားနေရသော အကျိုးတရားများသည် ကံအကြောင်း သက်သက်မျှမဟုတ်ဘဲ၊ အခြားသောအကြောင်းတရားများလည်း ပါဝင်ပတ်သက်နေလေသည်။ ထို့ကြောင့် “ကံပြုခဲ့သည့်အတိုင်း အကျိုး ခံစားမည်” ဟု ယူဆခြင်းအား “ကံ-ကံ၏ အကျိုး” ကို မှန်ကန်စွာ သိမြင်သဘောပေါက်သည်ဟု မဆိုနိုင်ချေ။ ကံ၏ အကျိုးကို ပြုပြင် တားဆီးမရနိုင်, မလွှဲရှောင်နိုင်တော့ပါက ၀ဋ်ဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းခြင်းဟူသည် မဖြစ်နိုင်တော့။
ရဟန်းတို့ “သတ္တ၀ါသည် အကြင် အခြင်းအရာအားဖြင့် ကံကို ပြု၏။ ထိုထို အခြင်းအရာအားဖြင့် ခံစားရ၏” (ယထာ ယထာယံ ပုရိသော ကမ္မံ ကရောတိ, တထာ တထာ တံ ပဋိသံဝေဒိယတိ) ဟု တစ်စုံတစ်ယောက်က ဆိုငြားအံ့၊ ရဟန်းတို့ ဤဆိုတိုင်း ဖြစ်လတ်သော် မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်သုံးမှု မဖြစ်တော့ချေ၊ ကောင်းစွာ ဝဋ်ဆင်းရဲ၏ အဆုံးကို ပြုရန် အခွင့်မရှိတော့ချေ။ (အံ-၃-၁၀၁၊ လောဏကပလ္လသုတ်)
“ကံပြုခဲ့သည့်အတိုင်း အကျိုး ခံစားခြင်း” မဟုတ်ကြောင်းကို အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် တိကနိပါတ်တွင် ဆားခွက်နှင့် ဥပမာပြု၍ ဆက်လက် ဟောကြားထား၏။ ရေအနည်းငယ်ရှိသော ခွက်အတွင်း ဆားခပ်လိုက်ပါက သောက်၍ မရနိုင်သော ဆားငန်ရည် ဖြစ်သွားသော်လည်း၊ ထိုပမာဏရှိသော ဆားအား ရေထုများပြားသော ဂင်္ဂါမြစ်တွင်းသို့ ထည့်လိုက်ပါက ဆားငန်ရည် ဖြစ်မသွားနိုင်ပါ။ ထို့အတူပင် အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် အနည်းငယ်မျှသော မကောင်းမှုကို ပြုရုံဖြင့် ငရဲသို့ကျရောက်ရ၏။ အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကား ထိုအနည်းငယ်မျှသော မကောင်းမှု၏ ဆိုးကျိုးကို မျက်မှောက်ဘ၀၌ ခံစားရသော်လည်း၊ ငရဲသို့ ကျရောက်ခြင်းကဲ့သို့ ကြီးလေးသော အကျိုးဆက်ကို မခံစားရပါ။
ပထမပုဂ္ဂိုလ်သည် သီလ, သမာဓိ, ပညာပွားများထားခြင်း မရှိသူဖြစ်သည်။ ထိုသူသည် ရေအနည်းငယ်သာရှိသော ခွက်တွင် ဆားထည့်သောအခါ သောက်မရအောင် ငန်သကဲ့သို့၊ မကောင်းမှုအနည်းငယ်သည် အပယ်ငရဲသို့ ဆွဲချကာ ကြီးစွာသော ဆင်းရဲကို ခံစားရ၏။ သီလ, သမာဓိ, ပညာပွားများထားသော ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်သည် မျက်မှောက်ဘ၀၌သာ အနည်းငယ်သော မကောင်းကျိုးကို ခံစားရသော်လည်း နောင်တမလွန်တွင် အကျိုးမခံစားရတော့ပါ။ အကယ်၍ အင်္ဂုလိမာလမထေရ်ကဲ့သို့ အရဟတ္တဖိုလ်ပေါက်တိုင် သီလ, သမာဓိ, ပညာတို့ကို ပွားများပါက အလုံးစုံသော ကံတို့သည် နောင်ဘ၀တဖန် အကျိုးပေးခွင့် မသာတော့ဘဲ၊ ၀ဋ်ဆင်းရဲမှ ချုပ်ငြိမ်းနိုင်၏။
ရဟန်းတို့ ''သတ္တ၀ါသည် အကြင် အခြင်းအရာအားဖြင့် ခံစားအပ်သော ကံကို ပြု၏။ ထိုထို ကံ၏ အကျိုးကို ခံစားရ၏'' (ယထာ ယထာ ဝေဒနီယံ အယံ ပုရိသော ကမ္မံ ကရောတိ, တထာ တထဿ ၀ိပါကံ ပဋိသံဝေဒိယတိ) ဟု တစ်စုံတစ်ယောက်က ဆိုငြားအံ့။ ရဟန်းတို့ ဤဆိုတိုင်း ဖြစ်လတ်သော် မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်သုံးမှု ဖြစ်နိုင်၏၊ ကောင်းစွာ ဝဋ်ဆင်းရဲ၏ အဆုံးကို ပြုရန် အခွင့်ရှိနိုင်၏။ (အံ-၃-၁၀၁၊ လောဏကပလ္လသုတ်)
မျိုးစေ့ချင်း တူသော်လည်း စိုက်ပျိုးရာ မြေ, ရာသီဥတု, ရေရရှိမှု စသော အခြားအကြောင်း တရားများပေါ်မှီ၍ သီးနှံဖြစ်ထွန်းမှု ကွာခြား၏။ ကံတစ်ခု၏ အကျိုးပေးသည် ယင်းကံကို ခိုင်မာ အားကောင်းစေရန် ထောက်ပံ့ပေးနေသော ဥပထမ္ဘကကံ၊ အားနည်းစေရန် ဆန့်ကျင်ဖိနှိပ်သည့် ဥပပီဠကကံ၊ အကျိုး မပေးနိုင်စေရန် ဖြတ်တောက်ဖျက်ဆီးသည့် ဥပဃာတကကံများပေါ် မူတည်၍ အကျိုးပေး ပမာဏကွာခြားသည်။ ထို့အပြင် အကြောင်းတရားများစွာပေါ် မူတည်၍ မျက်မှောက်ဘ၀၌ အကျိုးပေးခြင်း (ဒိဋ္ဌဓမ္မ ဝေဒနီယ)၊ နောက်အခြားမဲ့ဘ၀၌ အကျိုးပေးခြင်း (ဥပပဇ္ဇ ဝေဒနီယ)၊ နောင်ဘ၀အဆက်ဆက်၌ အကျိုးပေးခြင်း (အပရာပရိယ ဝေဒနီယ) ဟု ကံ၏ အကျိုးပေးခွင့်အလှည့် (လဒ္ဓ၀ိပါက၀ါရ) ကွာခြားနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် “ဇနေတိ သဒိသံ ပါကံ” ဟူသော စကားသည် ကံနှင့် အကျိုးတရားတို့၏ အကောင်း, အဆိုး အမျိုးဇာတ် တူခြင်းကိုသာ ဆိုလို၏။ ထို ကံပြုစဉ်ကအတိုင်း တူညီသော အကျိုး ခံစားရသည်ဟု မဆိုလို။ ဗုဒ္ဓ၏ ကမ္မ၀ါဒသည် “ကံ၏ စီမံပြဋ္ဌာန်းချက်ကို မလွှဲမရှောင်သာ, မပြုမပြင်သာ ခံစားရမည်” ဟုယူဆသော နိယတိဝါဒမျိုး (Determinism) မဟုတ်။ သီလ, သမာဓိ, ပညာတို့ကို ပွားများ အားထုတ်ခြင်းဖြင့် မကောင်းသော ကံတို့၏ အကျိုးပေးကို အားနည်း ပျက်ပြယ်စေ၍၊ ဘ၀သစ်ကို တဖန်ဖြစ်စေတတ်သော ကံတရားဟူသမျှအား ပယ်သတ်သည့် အဆုံးအမဖြစ်သည်။
၁။ အံ-၃-၁၀၁၊ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်-တိကနိပါတ်-စူဠ၀ဂ်-လောဏကပလ္လ၀ဂ်-လောဏကပလ္လသုတ်
၃။ Kamma and its fruit by Nyanaponika Thera
Posted by Sonata Cantata 8 comments
Labels: ကမ္မဿကတ, ဧရာ